Fiarovana ny tontolo ny tontolo iainana
6 dollar ny 1 taonina vidin’ny karbona eo amin’ny tsena iraisam-pirenena
Avokavokan’ny firenena ny ala ankehitriny. Tanindonindoza ny ala eto amintsika, araka izany natao tetsy amin'ny efitrano malalaky ny Hotel Neptune nanomboka ny faha 21 ka hatramin'ny faha 23 jolay lasa teo ny atrik'asa momba ny ady amin'ny voka-dratsy ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy fiarovana ireo ala sisa.
Saika niopana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny atrik'asa ary ny fanaparitahana ny REED+ izay rafitra natao hitantanana ny vola momba ny fiarovana ny tontolo iainana fa eo ihany koa ny rohy fiasa iraisam-pirenena natokana hampihenana entona mangeja hafanana avy amin'ny faharipahana sy ny fahasimban'ny ala izay mitsinjo manokana ny fampandrosoana maharitra, sy ny fitantanana ny ala, ary ny fikajiana sy fampitomboana ny tahiry karbona.
Saika nahatonga solotena tamin'ity atrik'asa ity avokoa ireo fikambanana sy sampandraharam-panjakana misy eto Toamasina. Tonga namarana izany tamin'ny fomba ofisialy ny minisitrin’ny hay voary sy ny tontolo iainana Rtoa NDAHIMANAJARA Johanita niaraka tamin'ny mpandridra nasionaly ny REED+. Nivohitra tamin'ny famaranana tamin'ny lahateny nataon'ny minisitrin’ny hay voary sy ny tontolo ianana fa efa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny vola amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, tsy hadinoiny ihany koa ireo ezaka mbola atao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Nisongadina ihany koa teto ny maha-zava-dehibe ny vidin'ny entona karbona eo amin'ny tsena iraisam-pirenene satria mahatratra 6 dollar ny vidin’ny iray taonina izay afaka entina hampandroso ny firenena sy iarovana ihany koa ny tontolo iainanana ary anaovana fotodrafitr’asa hafa hoy Rtoa minisitra. Ny tokony tsy hadinoin’ny tsirairay anefa fa ny ala dia mamelona ary ivelomantsika olombelona.
Prud'Homme : 23-07-2016 - 17:46